यी तीन बैंकले सार्वजनिक गरे नयाँ व्याजदर, कुन बैंकको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > यी तीन बैंकले सार्वजनिक गरे नयाँ व्याजदर, कुन बैंकको कति ?
यी तीन बैंकले सार्वजनिक गरे नयाँ व्याजदर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । तीन बैंककले नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेका छन । सार्वजनिक गर्नेमा नबिल, एभरेष्ट र कुमारी बैंक रहेका छन ।
तीन बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा मुद्दतीतर्फ संस्थागत निक्षेपमा ८.५० र व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत छ । बचतमा भने बैंकहरुको ब्याज फरक–फरक रहेको छ ।
नबिल बैंक : नबिल बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा बचततर्फ सबैभन्दा बढी ५.७५ प्रतिशत रहेको छ । हाल बैंकले १८ वटा बचत खाता रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा कम ब्याज ३.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकबाट कर्जा लिँदा सबैभन्दा बढी ब्याज १४.४४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा अन्य प्रकृतिको ऋण लिँदा १४.४४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।
हाल बैंकको कात्तिकसम्मको आधार दर ७.९४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट हाउजिङ, मोटरेज, अटो लोन लिँँदा १२.४४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । बैंकबाट पर्सनल लोन, टर्म लोन, ओभरड्राफ्ट लोन लिँदा १३.९४ प्रतिशत ब्याज लाग्दछ । यस्तै शैक्षिक धितोकर्जा लिँदा १२.९४ प्रतिशत ब्याज लाग्छ ।
एभरेष्ट बैंक : एभरेष्ट बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा बचततर्फ सबैभन्दा बढी ब्याज ६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत ब्याज रहेको छ । हाल बैंकले २७ प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
एभरेष्ट बैंकबाट ब्याज लिँदा १६.०२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । बैंकबाट ओभरड्राफ्ट, टर्म लोन, फिक्स लोन लिँदा १६.०२ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ ।
बैंकबाट हाउजिङ लोन लिँदा १५.७७, शैक्षिक धितोकर्जा १५.५२, हाउजिङ लोन १४.५२, भेहिकल लोन १५.२७ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । यस्तै बैंकबाट सेयर धितोकर्जामा ऋण लिँदा १५.२७ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । हाल बैंकको आधार दर ८.५२ प्रतिशत रहेको छ ।
कुमारी बैंक : कुमारी बैंकले पनि ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा बचततर्फ सबैभन्दा बढी ६.५० र सबैभन्दा कम २.५० प्रतिशत छ । बैंकले हाल १८ प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा रहेको छ ।
बैंकबाट ब्याज लिँदा १८.६२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरेको छ । बैंकबाट होम लोन, शैक्षिक धितोकर्जा, अटोलोन, सेयर धितोकर्जा लिँदा १८.६२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधार दर १०.६२ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७६ मंशिर १६ गते ०९:०९ मा प्रकाशित
सूर्या लाइफकोको लिलामी शेयरको बाँडफाँट तथा रकम फिर्ता
राप्रपा अध्यक्षमा डा. लोहनीको उम्मेदवारी घोषणा
११५ जनालाई जागिर खुल्यो, यस्तो छ अवसर
बैंकले जारी गर्दैछ १ करोड ३ लाख कित्ता सेयर, धितोपत्र बोर्डले दियो स्वीकृति !
तपाई पनि जाने हैन त ‘गुराँस उत्सव’मा ?